دراميتا (Dramita) Apk Free Download For Android | APKOLL
دراميتا (Dramita) Apk Download maimaim-poana ho an'ny Android
Salama daholo, eto izahay miaraka amina fampiharana Android mahatalanjona iray hafa izay fantatra amin'ny anarana hoe دراميتا. Dramita dia rindrambaiko fialamboly Android maimaim-poana, izay manome drama farany, fantsom-pahitalavitra taonina ary koa sarimihetsika azo jerena. Manolotra ireo rehetra ireo maimaimpoana ary tsy misy fiampangana premium.
Betsaka ny fampiharana fialamboly eny an-tsena, saingy hanolotra ity fampiharana ity izahay. Ny fampiharana hafa rehetra dia mitaky premium hidirana amin'ny endri-javatra ary raha misy amin'izy ireo manolotra serivisy maimaim-poana, dia tsy manome votoaty tsara izy ireo. Fa ity app ity dia ambony noho ny hafa rehetra.
Manolotra ireo serivisy karama mendrika rehetra ireo maimaimpoana. Rindrambaiko maimaimpoana tanteraka izy io, miaraka amin'ny atiny tsara indrindra. Hizara ny fiasa sy ny atiny rehetra ato amin'ity rindrambaiko ity izahay. Noho izany, mijanona miaraka aminay fotsiny ary fantaro ny fampiasana an'ity fampiharana ity. Azonao atao koa ny misintona azy amin'ity pejy ity.
Topimaso momba ny دراميتا
Dramita dia rindrambaiko Android maimaimpoana, izay novolavolain'ny apkand. Izy io dia fampiharana fialamboly maimaim-poana, izay manolotra ny fomba rehetra mety hampiala voly ny mpampiasa. Manolotra sarimihetsika an-taonina avy amin'ny faritra samihafa izy io, azonao alefa amin'ny alàlan'ity fampiharana ity.
Manolotra sarimihetsika avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao izy io. Manolotra sarimihetsika Hollywood, sinema Hindi, sinema arabo, Tiorka, sy ny maro hafa. Hahita bebe kokoa ianao rehefa mandinika ity sokajy ity. Izy io dia manolotra sarimihetsika an-taoniny amin'ireo sokajy ireo, izy rehetra dia mifandray amin'ny fizarana lehibe. Noho izany, jereo ny fizarana lehibe alohan'ny hidirana azy.
The IPTV App manome fantsona fahitalavitra avy amin'ny faritra sy karazany ihany koa. Afaka mahita ny sasany amin'ireo fantsona fialamboly maimaim-poana ianao. Izy io koa dia manome fantsom-panatanjahantena, izay mandefa serivisy efatra amby roapolo ora ary afaka mandefa fanatanjahantena mivantana ihany koa ianao. Manolotra karazana lisitry ny fantsona rehetra izy io, mila manindry ny fantsona fotsiny ianao mba hidirana azy.
Ny tena mampiavaka ny Dramita App dia Dramas. Manome ny sasany amin'ireo tantara farany sy malaza indrindra amin'ny faritra sy tranokala samihafa. Tsy hanonona ny anarana eto izahay, fa tokony hanandrana ity fizarana ity indray mandeha ianao ary afaka mizaha ireo rehetra ireo.
Miankina amin'ny fifandraisana Internet ny kalitaon'ny sary. Raha manana fifandraisana Internet haingana ianao, dia hampiakatra ny kalitaon'ny sary amin'ny Full HD 1080p sns. Raha nanana fifandraisana Internet miadana ianao dia hampihena ny kalitao arakaraky ny fifandraisana Internet anao.
Azonao atao ihany koa ny manova sy mamela azy hilalao amin'ny kalitao video tokana. Izy io dia manome servisy maro hampifandraisana ireo mpampiasa. Mampiasa mpizara samihafa, haingana sy milamina ny fiasana. Azonao atao ihany koa ny mahita ny sasany amin'ireo sokajy tsara indrindra amin'ity app ity.
Anaran'ny fonosana com.apkita.dramita
Endri-javatra manan-danja amin'ny دراميتا
Misy endri-javatra maro kokoa taonina, azonao zahana amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Lazainay ao amin'ny fizarana etsy ambony ny sasany amin'izy ireo. Noho izany, izao dia hizara ny tena mampiavaka an'ity rindranasa ity aminareo rehetra izahay eto amin'ny lisitra eto ambany.
Sarimihetsika, fantsom-pahitalavitra ary fampisehoana an-taonina maro no misy
Fanangonana fanavaozana ny angon-drakitra isan'andro
Mora ampiasaina ny mpampiasa
Aza manome karazana doka
Multi Servers mahatonga ny fifandraisana tsy vaky
Manana rindrambaiko mitovy amin'izany izahay, manantena fa tianao ihany koa izy ireo.
TV VIP tsy ara-dalàna
Ahoana ny fampidinana دراميتا?
Dramita Apk dia hita ao amin'ny Google Play Store, fa raha te-hisintona azy amin'ity pejy ity ianao. Mila mahita ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity. Kitiho eo izany ary miandry segondra vitsy ,, hanomboka ho azy ny fisintomana.
Aza adino ny mamela ny 'Source tsy fantatra' avy amin'ny fametrahana Security, alohan'ny fizotry ny fametrahana.
دراميتا no fampiharana Android tsara indrindra hahazoana fialamboly tsy voafetra. Afaka mandany fotoana kalitao amin'ny fampiharana ianao. Noho izany, sintomy fotsiny ity fampiharana ity amin'ity pejy ity ary manomboka streaming.
Sokajy Apps Tags Dramita, Dramita Apk, Dramita App Post Fikarohana